Muxuu ka yiri Jose Mourinho fal celintii uu xalay ku hor sameeyay jamaahiirta kooxda Juventus? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
November 8, 2018 at 09:40 Muxuu ka yiri Jose Mourinho fal celintii uu xalay ku hor sameeyay jamaahiirta kooxda Juventus?2018-11-08T09:40:24+00:00 CAYAARAHA
(Manchester) 08 Nof 2018. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa muran xoogan dhaliyay kadib marka uu soo idlaaday kulankii dhex maray kooxaha Juventus iyo Manchester United, kaasoo kusoo idlaaday 1-2 ay ku adkaatay Red Devils.
Jose Mourinho ayaa sameeyay fal celin ay si weyn kaga caroodeen jamaahiirta kooxda Juventus ee ku sugnayd Allianz Stadium, kadib marka ay soo idlaatay ciyaarta.
Macalinkii hore kooxda Inter Milan ayaa la kulmay inta uu kulanka socday qeylo ay jamaahiirta kaga soo horjeedeen isaga, laakiin ciyaarta kadib ayuu sameeyay fal celin muran xoogan dhalisay, kadib markii uu gacantiisa midig inta uu ku dhejiyay dhagta ayuu ku hor wareegay jamaahiirta.
Kulanka kadib ayuu Jose Mourinho u sheegay wargeyska “Sky Sport” ee dalka England: “Waxaan la kulmay 90-ka daqiiqo ee cambaareeyn ah, waxaan halkan u imid inaan shaqadeyda qabsado, mana jiraan wax intaas ka badan, ma aanan dooneynin inaan qof dhaawaco, kaliya waxaan doonayay inaan maqlo qayladooda”.
“Laga yaabee inaanan sameyn lahayn arintaas, balse way i caayeen, xitaa waxay caayeen qoyskeyga, sidaas ayaana ula dhaqmay ayagana”.
“Waxaan ciyaarnay kulan weyn, ma dhihi karo waan fiicnayn, waxaan awoodnay inaan guul gaarno, waxaan ciyaarnay kulan fiican, waxaana raadinay guusha ilaa iyo dhamaadka ciyaarta, ugu dambeyn waxaan helnay 3-da dhibcood ee muhiim ah”.
« “Waxaan awoodnay inaan guul taariikhi ah ka gaarno Manchester United balse…” – Massimiliano Allegri
Muxuu Jose Mourinho kala jeeday dabaal deggii uu sameeyay markii ay dhammaatay ciyaartii Juventus? Isaga ayaa ka jawaabay! »